Santa Claus anotiunzira gumi nematanhatu maapplication ane ma discounts anosvika ku16% | IPhone nhau
Santa Claus anotiunzira gumi nematanhatu maapplication ane ma discounts anosvika ku16%
Gore rega rega, uchitora mukana wechiitiko chinomiririra zororo reKisimusi, boka revagadziri vari kumashure mamwe emapurogiramu anozivikanwa eApple, iPad uye Mac, batanidza masimba kutipa zvakakosha zvaderedzwa sechikamu chekusimudzira chinonzi "App Santa".
Mushandirapamwe wegore rino we "App Santa" wanga uchimhanya kubva nezuro uye unosanganisira zvikumbiro zvinozivikanwa seTwitter mutengi Tweetbot, Screens, Launch Center Pro, Star Walk zvichingodaro kusvika pagumi nenhanhatu. Mazhinji eaya mafomu ari chikamu chekusimudzira anowanikwa aine dhisikaundi yemakumi mashanu muzana, asi mune zvimwe zviitiko iyo dhisikaundi inosvika kusvika makumi masere muzana. Rangarira kuti iwe unofanirwa kukurumidza kuti utore nekuti Zuva rekupedzisira rekutora maapplication akaderedzwa achave anotevera Muvhuro, Zvita 26.
1 Zvirongwa zvakadzikiswa zve iPhone ne iPad
1.2 Rando Emoji
1.4 Zvinyorwa 4
1.8 Kutanga Center Pro
1.9 Castro: Podcast Player
1.10 Kufamba nyeredzi
1.11 Nyeredzi Famba HD
1.12 Boka Chinyorwa +
2 Zvirongwa zvakadzikiswa zveMac
2.5 Zuva Rimwe
Zvirongwa zvakadzikiswa zve iPhone ne iPad
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 9,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye4,99 euros chete.
Tweetbot 5 ye Twitter5,49 €
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 1,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 19,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye9,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne40% dhisikaundi ye2,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne20% dhisikaundi ye3,99 euros chete.
Kununurwa: package packagevakasununguka
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne80% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Makore: Budget uye Mari4,99 €
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne66% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Vee yeVhidhiyo2,99 €
Kutanga Center Pro
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 3,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne25% dhisikaundi ye2,99 euros chete.
Castro Podcast Playervakasununguka
Nyeredzi Kufamba - Sky Mepuvakasununguka
Nyeredzi Famba HD
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana iine 80% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Nyeredzi Famba HD - Sky Mepu4,99 €
Boka Chinyorwa +
Boka Chinyorwa +4,99 €
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 3,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne75% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 9,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne30% dhisikaundi ye6,99 euros chete.
Zvirongwa zvakadzikiswa zveMac
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 29,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye14,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne25% dhisikaundi ye3,99 euros chete.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 49,99 euros asi neApp Santa Santa unogona kuiwana ne40% dhisikaundi ye29,99 euros chete.
Usakanganwa kuti kushomeka kwezvikumbiro zvinosanganisirwa mu «App Santa» kusimudzira vari inoshanda chete kusvika Muvhuro unotevera, Zvita 26. Usavarega vachipukunyuka. Panguva ino, yeuka kuti zvidzikiso zvinosvika makumi masere muzana zvemushandirapamwe zvinoramba zvichishanda Www, chirongwa chinoitwa nevagadziri veEuropean.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Santa Claus anotiunzira gumi nematanhatu maapplication ane ma discounts anosvika ku16%
AirPods dzakatengwa kubva kuApple Chitoro pamhepo dzinosvika pamberi pekutarisirwa